Xasan Sheekh Maxamuud“waa in laga fekeraa maxaa 30 sano oo dib udhac ah geliyay Soomaaliya, hadase maxaa diidan in laga baxo” – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qayb-galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May ayaa ka hadlay xaaladaha ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan Bulshada Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta oo kale ku tilmaamay in ay tahay maalin wayn oo qiima badan islamarkaana ay tahay in la xasuusto dhalinyaradii Gobanimo doonka Soomaaliyeed ee Ururkii SYL. Ururkii dhalinyarada SYL ee ayaa la aas-aasay 15-kii May sanadkii 1943-dii waxaana ka soo wareegatay 76 sano.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada waxa uu ka dalbaday in ay la yimaadaan aragti iyo jadwal ay uga qayb-qaataan horumarinta Soomaaliya iyo dhismaha dowladnimada.
“Dhamaan waxaan ugu hambalyeeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dabaal-dagga 15-ka May, waxaana u rajeynayaa in guul iyo gobanimo” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee Soomaaliya. “Door wayn ayey dhalinyaradu ka qaateen dhismaha dowladnimada maantana wali dalkaa u baahan waa in ay sidaasi kasii xoojiyaan dadaalkooda” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa ku taliyay in laga fekero waxa Soomaaliya u horseeday bur bur muddo ka badan 30 sano ilaa hadana u diidan in ay ka soo kabato dhibaatadii ka dhalatay bur-burkaasi si ay Nabad iyo Xasilooni u helaan bulshada Soomaaliyeed.
“Waa inaa ka fekernaa maxaa 30 sano oo bur bur ah na geliyay iyadoo ay soo halgameen Aabayaasheen, ilaa hadda maxaa noo diidan in aan ka soo kabano bur burkii aan galnay” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay goob lagu dhigayay xuska 15-ka May, maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Senator Xuseen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta dhalinyarada 15-ka May
Madaxweyne Farmajo "Shirkii Garowe guul ayuu ku soo dhamaaday mana fashilmin "